Masoandro UFO: Toerana tsara indrindra hisamborana zavatra manidina tsy fantatra
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Masoandro UFO: Toerana tsara indrindra hisamborana zavatra manidina tsy fantatra
Vaovao Mafampana Aostralianina • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Chili • Vaovao Mafana China • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Angamba ny fanananao fotoana bebe kokoa ao an-trano noho ny COVID-19 dia nanome fotoana bebe kokoa hijerena ny habakabaky ny lanitra sy hijerena… UFOs. Sa ve misy ny fahitana UFO betsaka kokoa noho ny teo aloha?
Araka ny military.com, mihoatra ny 1,000 ny fahitana UFO tamin'ny taona 2020 (manodidina ny 7,200 amin'izy ireo) noho ny tamin'ny taona 2019.
Moa ve ny telefaona misy fakan-tsary natsangana nanamora ny fakana zavatra tsy fantatra eny amin'ny lanitra? Ny sary dia tsy tokony ho tsara raha tsaraina amin'ny sary nalaina teo aloha.
Hankany amin'ny toerana malaza amin'ny fahitana UFO ve ianao sa hanao ny mifanohitra amin'izay ary manalavitra?
Betsaka ny vitsivitsy izay gaga amin'ny zavatra tsy fantatra tsy manidina, ary ny dia mankany amin'ny toerana malaza amin'ny fahitana dia fialan-tsasatra natao mba hanafarana. Raha iray amin'ireo manantena ianao fihaonana akaiky amin'ny karazany fahatelo, Ireto misy toerana kendrena hametrahana lisitra mpihaza UFO anao.
Faritra 51, Nevada
Hatramin'ny teôria tsikombakomba vaovao ka hatramin'ny hetsika Facebook izay mandrisika ny olona hiditra ao anaty fotony, Area 51 dia ao anaty vaovao hatrany. Ny fametrahana miaramila amerikana, izay manodidina ny 160 km avaratry ny Las Vegas, dia iraisan'ny teoloista miray tsikombakomba. Teoria ary boky navoakan'ny mpikaroka sy ny ao anatiny ao amin'ny governemanta aza no manambara fa io faritra io dia toerana fitahirizana sambon-danitra vahiny nianjera, anisan'izany ny mponina ao aminy, na velona na maty, miaraka amin'ireo fitaovana azo tao Roswell. Ny sasany aza mino fa ny faritra dia ampiasaina amin'ny fanamboarana fiaramanidina miorina amin'ny haitao vahiny azo. Ny UFOlogists sasany dia milaza fa misy toerana miafina miafina ambanin'ny tany any ambanin'ny Papoose Mountains any Nevada izay itazonana miafina ireo zavaboary ivelan'ny tany ary tsy ao amin'ny Faritra 51. Na tena manana vahiny izy na tsia dia azo iadian-kevitra, fa ny faritra azo antoka voasokajy. Ny mpitsidika dia afaka mitaingina ny làlam-panjakana eto izay misy ny soratra hoe "Highway Extraterrestrial." Feno orinasa manana lohahevitra vahiny manaraka ny làlan'ny efitra. Aza adino ny mijery ambony raha eto mandritra ny alina ianao. Mety ho ny andro sambanao, na amin'ny alina alina.
Ny sambo reny any amin'ny toeran'ny UFO rehetra, ity toerana ity dia fantatra amin'ny zava-nitranga tany Roswell izay nitranga tamin'ny Jolay 1947. Toa nanambara ny tafika amerikana fa nahavita sambon-danitra avy tany an'efitra teo akaiky teo izy ireo (taty aoriana, nilaza izy ireo fa balon'andro fotsiny io. ). Nanomboka tamin'izay, ny teolojiana niray tsikombakomba dia nitaky ny sisa tavela amin'ny saoseram-panidina, ary na dia ireo vahiny maty aza, dia nafenina miafina eto. Ilay faritra dia misy ny Roswell Spacewalk sy ny International UFO Museum and Research Center miaraka amin'ny Roswell Museum & Arts Center, izay feno olona mpankafy habakabaka avokoa. Mety ho sarotra ny mahita UFO tena izy eto, fa mankanesa any amin'ny tanàna mandritra ny Fetiben'ny Rosio UFO izay atao isaky ny faha-XNUMX Jolay faran'ny herinandro mba hankalazana ny zava-drehetra any ivelany miaraka amin'ireo mpankafy hafa. An'arivony ireo mitafy akanjo mihaona eto amin'ity Comic-Con an'ny mpivavaka UFO ity, izay misy ny lahateny sy ny matso misy ny lohahevitra vahiny.
Joshua Tree miorina amin'ny làlambe 29 Palms dia fantatra fa manana lalan-drano ambanin'ny tany be dia be ao anaty votoatin'ny mineraly nefa tsy misy antony mazava. Ny valan-javaboary dia toeram-pitrandrahana harena an-kibon'ny tany 300 tany amin'ny tany efitra midadasika, anisan'izany ny havoana quartz kristaly fotsy tsy manam-paharoa ao ambadiky ny Giant Rock. Inoana fa base vahiny izy io nataon'ny mpikaroka sasany. Ireo mpanaraka ny UFO izay mizaha ny tany efitra eto dia mino fa i Joshua Tree dia mipetraka eo amin'ny lafiny avaratra faha-33 toa an'i Roswell. Mety ho a toerana mafana ho an'ny fahitana UFO. Nandritra ny taona maro, mpikaroka UFO dia niangona teto nandritra ny famelabelaran-kevitra nandritra ny faran'ny herinandro nandritra ny faran'ny herinandro. Raha heverina ho Woodstock of UFOlogy, ny faran'ny herinandro dia manazava ny zavatra rehetra tsy hazavaina amin'ny siansa UFO sy ny vahiny hatrizay ka hatramin'ny fiavian'olombelona sy ny fampahafantarana nataon'ny governemanta.
Ny teleskaopy Aperture Spherical Spherical (FAST) dimy metatra metatra metatra dia teleskaopy radio lehibe indrindra sy mora tohina indrindra manerantany. Any amin'ny faritra ambanivohitra amin'ny faritanin'i Guizhou any Shina, ny FAST Radio Telescope, izay nahita jiro voalohany tamin'ny 2016, dia inoan'ireo mpikaroka sinoa ho safidy tsara indrindra amin'ny olombelona hamongorana ireo hafatra avy any amin'ny habakabaka ivelany. Ny anaram-bosotra Tianyan, izay midika hoe “Mason'ny Lanitra” na “Mason'ny Lanitra”, nataon'ny mpanorina azy, dia hita hamaha ny zava-miafina lehibe indrindra an'izao rehetra izao. Iray amin'ireo iraka voalohany ataony ny mamantatra ireo fambara an-tserasera amin'ireo vahiny. Tsidiho ity fahagagana lehibe siansa ity ary mahazoa fotoana hijerena ireo mpahay siansa miasa amin'ny tetikasa tena misy ifandraisany amin'ny tany ivelan'ny tany.
Wycliffe Well, Aostralia
Wycliffe tsara miorina amin'ny làlambe Stuart any amin'ny Faritany Avaratra ao amin'ny firenena dia fantatra amin'ny anarana hoe renivohitra UFO any Aostralia. Ny fahitan'ny UFO ny mponina eto dia fahita loatra ka ny faritra dia manana fihaonambe manana lohahevitra hafahafa ao amin'ny Wycliffe Well Holiday Park. Izy io dia iray amin'ireo toerana mafana indrindra 5 ahitàna fahitana vahiny eto amin'izao tontolo izao izay ahafahan'ny mpandeha misidina mijery ny zana-tsokajy UFO, matetika mandritra ny fiandohan'ny main-tany manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Oktobra. Ny tatitra momba ny zavatra manidina tsy fantatra dia nanomboka nipoitra tao amin'ity faritra ity hatramin'ny andron'ny Ady Lehibe Faharoa. Ireo mpitsidika tonga eto dia afaka mandray ny teleskaopy ary mijanona ao amin'ny cabins ao amin'ny Wycliffe Well Holiday Park. Ny mponina eo an-toerana dia milaza fa fahitana zavatra hafahafa saika isan'andro mandritra ny "vanim-potoana UFO."
Ny tanànan'i San Clemente dia heverina ho renivohitra UFO tsy ofisialin'izao tontolo izao. Raha ny filazan'ny mpikaroka miasa eto dia manodidina ny iray isan-kerinandro ny fahitana UFO. Be dia be ny fahitana ka nanangana lalana UFO ofisialy 30 km ny Birao Fizahan-tany any Chili tamin'ny taona 2008. Ilay lalana dia mamakivaky ireo tendrombohitra Andes mahafinaritra manarona ireo toerana samihafa izay nitaterana fihaonana akaiky. Ity faritra ity dia misy ny farihin'i Colbún Lake izay misy mineraly avo lenta nefa tsy misy loharano (mahazatra ve?). Ny fahitana an'io lalana io dia ny El Enladrillado, faritra midadasika sy hafahafa noforonina tamin'ny vatam-bolanina 200 notapahina tanteraka izay inoana fa napetraky ny sivilizasiôna taloha. Ireo teolojiana fikomiana sy mpikaroka kosa dia mino fa toeram-pandraisana ho an'ny extraterrestrials izany.
JOHN DEEGAN hoy:
Oktobra 21, 2021 ao amin'ny 10: 38
Niara-nitory tamin'ny mpiara-miasa tamiko aho, UFO, izay nanidina tamina zavamaniry simika tany Manchester tamin'ny 5.50 maraina maraina tamin'ny volana jolay taona 1999, handeha hiasa ao amin'ny Trafford Park eo amin'ny bisikiletako aho rehefa naheno ny feon'ireo mpitsabo vonjy taitra zavamaniry simika teo akaiky teo. , rehefa nijery avy teo amin'ny arabe aho dia nisy ity asa tanana nivezivezy teo amin'ny fantsona simika ity, niaraka tamiko haingana ny mpiara-miasa iray izay nandeha bisikileta handeha hiasa ihany koa. Tena nangina tokoa tamin’izany fotoana izany ary ny an’ny hooter ihany no tabataba, tsy nisy tabataba avy amin’ilay sambo, toy ny hoe nijanona teo afovoan-drivotra izy ireo ary nametraka ny frein tanana. Tsy naman'ity tontolo ity fa nahatonga antsika roa ho tara tamin'ny famindra 6 maraina tao amin'ny ozinina nisy ahy tamin'izany fotoana izany, ka nanjary mpino aho fa notsidihin'ny extraterrestrials izahay, nandeha tamin'ny lahateny tamin'ny 1994 momba ny Suffolk OVNI nomen'ny Col. Charles Holt ilay komandin'ny toby lefitra teo aloha tao amin'ny toby miaramila Usa tao ary nijery fandaharana vitsivitsy momba izany teo aloha. Amin'ny maha mpino katolika kristiana ahy ihany dia tamin'ny Febroary 2016 aho no nahita fa niseho tamin'i Veronica tao Bayside USA (1970-94) i Jesosy sy ny sasany tamin'ireo olo-masina, ankoatra ny zavatra hafa nolazain'izy ireo taminy momba izay hitranga. amin'ny andro farany iainantsika ankehitriny dia i satana sy ireo mpiara-dia aminy no nanidina ireo sanganasa isan-karazany nanerana an'izao tontolo izao mba hamitahana ny olombelona hino fa notsidihin'ny firazanana vahiny tsy misy isika. Rehefa mitranga ny Fampakarana kristiana izay inoako fa ho avy amin'ity folo taona ity ny fampahalalam-baovao dia mitatitra amin'ireo sisa tavela fa nisy fakàna an-keriny faobe nitranga mba hanafenana ny zava-mitranga avy amin'Andriamanitra (vaovao sandoka bebe kokoa), izany dia hanambara amin'ny taona 7. Ny vanim-potoanan'ny fahoriana, izany hoe, rehefa nanafaka ny mpitaingin-tsoavaly 4 Jesosy, dia hanomboka ny ady amin'ny hery mitambatra ao Rosia / Shina & New York dia tratran'ny comet, raha mila fanazavana fanampiny dia mandehana any amin'ny tranokalan'ny toerana masina. http://www.tldm.org ary jereo eo ambanin'ny Directives momba ny lohahevitra. Ny fisehoan'izy ireo tao Bayside dia nohamarinin'ny fahagagana maro natao tany, na dia tsy hanaiky izany amin'ny fomba ofisialy mihitsy aza ny fiangonana, dia nilaza izy ireo tao fa niditra tao amin'ny fiangonana i Satana amin'izao fotoana izao amin'ny ambaratonga ambony indrindra ao anatin'ny ady ara-panahy mitohy, ny papa tena izy farany dia. Benedict.
Rehefa tonga tany Manchester ny fampisehoana UFO & Consciousness tamin'ny taona 2017 dia nitranga teny ampitan'ny arabe izay nanatri-maso ny UFO tamin'ny taona 1999 aho, noho ny dia nataoko manokana izay inoako fa tsy kisendrasendra izany. Izy ireo dia mampiroborobo ny hevitra amin'ny fampisehoana fa mitsidika antsika ny hazakazaka vahiny sy ny sasany amin'ireo teorian'ny tsikombakomba manodidina izany. Misy ary efa maro ny fanadihadiana natao tamin'ny fahitalavitra momba io lohahevitra io izay mampiroborobo io hevitra io ihany koa.
Nanana taratasy navoaka tao amin'ny gazety tsy ara-pivavahana eto an-toerana momba ity lohahevitra ity aho tamin'ny taona 2018 tao amin'ny fetin'ny Assomption an'i Masina Maria.
Ka izay no zava-miafina nohazavaina, Satana sy ny mpiara-dia aminy dia zavaboary mihoatra ny natoraly ka izany no mahatonga ny baiboly milaza amintsika fa tsy ny nofo sy ny ra fotsiny no toherintsika fa ny hery sy ny fanapahana. Izany no mahatonga ny kristiana hivavaka / fifadian-kanina sns ao amin'ny fitaovam-piadiana ara-panahy, izay mahomby amin'ny asany.
Miarahaba an'i John